Ngokuvamile isimo sivela lapho isiphequluli sibonisa umlayezo wephutha 404 esikhundleni sekhasi elithile. Abantu basabela ngokuhlukile: abanye bangaboni, abanye bayathukuthela, abanye bayethusa. Iyini engu-404 engatholakali, ebangela le nkinga? Uma kungekho khasi elifunwa ngumuntu, lo mlayezo uboniswa. Bambalwa abantu abazi ukuthi ngokuhlonipha abangama-404 abangatholakali kukhona amaphrojekthi e-intanethi, izinhlu eziphelele, imincintiswano ihlelwe. Okokuqala ake sibone ukuthi i-Error 404 ivela nini uma ibonakala. Uma ubheka ohlangothini lobuchwepheshe, isiphequluli siphendukela kuseva, esithumela isimo sekhodi sekhasi eliceliwe. Uma isicelo senziwe kahle, lokhu kufana nekhodi "200 OK". Abasebenzisi babona ikhasi eliceliwe lewebhusayithi. Uma kwenzeka ukuthi isicelo senziwe ngamaphutha, abantu babona umlayezo ngesimo 404 esingatholakali.
Izinombolo zibonisa kanjani iphutha 404?
Akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi idijithi yokuqala ibonisa iphutha lenqubo yekhasimende (isiphequluli). Kucatshangwa ukuthi i-URL ayikho noma ayivumelekile. I-Zero ibonisa izinkinga ze-syntax. Idijithali yokugcina ibizwa ngokuthi inguqulo ye-40x yephutha, kufaka phakathi, ngaphezu kwesimo esingatholakali esingu-404, isicelo esingalungile esingu- 401 nesine- 400.
Izinganekwane ezithakazelisayo mayelana nephutha 404
Kunenganekwane ehlekisayo mayelana nephutha 404, ngokusho ukuthi, esikhungweni sokucwaninga esithintekayo ekuthuthukiseni iWorld Wide Web, kwakukhona igumbi elinenani elifanayo esiteji sesine. Ngesinye isikhathi, inani lokwaziswa okwakucutshungulwa lidlulile kuzo zonke izimiso ezivumelekile, ososayensi abaningana babengenakusebenza ngesikhathi esisodwa kumqulu owodwa. Yilapho abathuthukisi beza nomqondo wokwenza umyalezo wephutha ekutsheleni ukuthi ifayela alitholakalanga.
Ososayensi ngokwabo kusukela phakathi kweCERN baphika lokhu. Bathi akukho ndawo enjalo. Kubalulekile ukuphawula ukuthi akunakwenzeka ukuthi ungalokothi uhlangabezane nephutha 404 elitholakali. Kunesizathu esisodwa salesi siphambeko. E-Russia, uxhumano lwe-intanethi ngokudayela (ucingo) luvame kakhulu. Uma uxhumano nomhlinzeki lubi, iphutha 404 livela.
Izindlela zokuxazulula le nkinga
Yini engingayenza ukuvimbela ikhasi le-404 elitholakali kubasebenzisi abesabisayo, ukuthi ungakugwema kanjani lokhu? Zikhona izindlela zokuxazulula le nkinga? Kubanikazi bezinsiza zewebhu kubalulekile ukuthi azikho "izixhumanisi" eziphukile. Lokhu kulula ngesayithi eliyi-static, elingamakhasi angaphezu kuka-10. Uma insiza ye-Internet inkulu, kuningi okuqukethwe kuyo, kunzima ukugcina konke okulawulwa njalo. Ngokushesha noma kamuva, isixhumanisi sekhasi esisekho. Futhi umsebenzisi ngokwakhe angangena ikheli elingalungile. Kubalulekile ukwenza iphutha lokubika ikhasi elihle 404. Akufanele liyesabe izivakashi zesayithi. Kuyo kubalulekile ukukhombisa ulwazi mayelana nephutha ngokwayo ukuze abantu baqonde ukuthi kungani belapha. Ungakwazi futhi ukubeka kukho ulwazi olumayelana nomsebenzisi. Isibonelo, imfundo, ifomu lokusesha. Yenza izixhumanisi ezihlokweni ezithakazelisayo zesayithi lakho kuyo, ungakhohlwa ngokukhuluma ngekheli lekhasi eliyinhloko lensiza. Ifomu lempendulo ayisosiyithintelo.
Yenze konke ngamahlaya kumsebenzisi ukumomotheka! Khona-ke angeke esabe abantu abangebona kuqala iphutha elinjalo. Ubuhle be-site bubaluleke kakhulu, kubalulekile ukuthi abantu babe nesifiso sokuya ku-intanethi yezinsiza zakho, futhi inqwaba yamaphutha, engakhiwe kahle, ingacasula izivakashi. Uma umnikazi wesayithi uyazi ukuthi ikhasi elihanjiswe lingasetshenziswa ngabantu, kubalulekile ukuqondisa kabusha ekhelini elisha, ukuxwayisa mayelana nokuhamba kwabasebenzisi. Udinga ukuvula ikhasi mayelana nephutha 404. Ukwenza lokhu:
- yenza le khasi, uyiqambe igama, isibonelo, "404.htm";
- dala ifolda empandeni, yilobe ku-.htaccess;
- faka ikhasi mayelana nephutha;
- bhala ku-Error.htaccessIsikhumbuzo 404 / iphutha / 404.htm.
Zonke lezi zenzo zizogwema umyalezo ongatholakali emakhasini wesayithi lakho.
Ufuna ukwazi ukudala uhlelo lokusebenza lwe-Android?
Isidakamizwa esithi "Fukortsin" sinomkhuhlane wezinkukhu
Basalt fibre: izici nokusetshenziswa esisebenzayo
Bandeau ingubo - izingubo zikanokusho wenzela enye intokazi
Futhi amandla enuzi zempi iyunithi Bemisebe 4
Eugene Gapchinskaya: yokudweba umculi, ngikhazimulise ezweni ebuntwaneni
Bophela ngoba izinja ngezandla zakhe: amaphethini, osayizi, nezinhlobo. Indlela yokwenza kusezandleni zakho uzwe inja?
Uphenyo "Tinkoff" ebhange: imicabango yabantu amakhasimende '
Yini ubude wesikhathi ukusebenza se-Code Labour